အိမျထောငျဘကျ လိုတာလား ၊ အိမျဖျော လိုတာလား – Messi Club
အိမျထောငျဘကျ လိုတာလား ၊ အိမျဖျော လိုတာလား
ယောကျြား တဈယောကျက သူ့အဝတျသူ လြှျောဖှတျနတော တှရေ့ငျ လူတှကေ ” မငျး မိနျးမ ယူလိုကျ ပါလား၊ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ မလြှျောရတော့ ဘူးပေါ့ ” လို့ပွောမယျ။ ယောကျြား တဈယောကျ ထမငျးဟငျး ခကျြနတော မွငျရငျ လူတှကေ ” မငျး မိနျးမ ယူလိုကျ ပါလား၊ ကိုယျတိုငျ မခကျြရတော့ ဘူးပေါ့ ” လို့ ပွောမယျ။
အသကျ ၃၅ နှဈ အရှယျရှိတဲ့ ယောကျြား တဈယောကျ သူ့ အတှငျးခံ သူ မလြှျောတတျ၊ သူ့ကျောဖီသူ ဖြျောဖို့ ရနှေေးတောငျ မတညျတတျ၊ သူ့အိပျယာ သူတောငျ မပွငျတတျ၊ သူစားပွီးသား ပနျးကနျတောငျ သူ့ဘာသာ မဆေးတတျတဲ့ အခါ သူ့အမကေ ” မငျး အခွကေဖြို့ လိုနပွေီ၊ မငျးကို ဂရုစိုကျ ပွုစုဖို့ မိနျးမတဈယောကျ ယူတော့ ” လို့ ပွောမယျ။
ဒါဘယျလို ဖွဈတာလဲ ?
ဒီအဖွဈတှကေို တခွား တဖကျက နားလညျရရငျ လူတှရေဲ့ စိတျထဲကနေ မသိမသာနဲ့ ” မိနျးမ ယူတာ ဒီအလုပျတှေ လုပျဖို့ ဖွဈတယျ ” လို့ ပွောသလို ဖွဈနတေယျ။ သနျ့ရှငျးရေးလုပျ၊ ထမငျးဟငျး ခကျြပွုတျ၊ လြှျောဖှတျ၊ ကလေးမှေးဖို့ အတှကျသာ မိနျးမ ယူကွပါလို့ ပွောနသေလို ဖွဈနတေယျ။
မြားသောအားဖွငျ့ မိနျးမတှဟော သူတို့ ခဈြတဲ့ ယောကျြား၊ သူတို့ ခဈြတဲ့ သားသမီး အတှကျ ဒါတှကေို လုပျပေးခငျြ ကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လူတှကေ အဲဒီလိုတှပေဲ မွငျနေ ပွောနတေဲ့အခါ အဲဒီလို ယောကျြားတှဟော အိမျထောငျဖကျကို လိုတာလား ? အိမျထောငျဖကျ အမညျခံ အိမျဖျောကို လိုတာလား လို့ ဝခှေဲမရ ဖွဈလာကွတယျ။
မိနျးမတှဟော သူတို့ရဲ့ ရှိရငျးစှဲ အသကျထကျ ၃ ဆ ပိုပွီး ရုပျရငျ့ နကွေတာဟာ စိတျဖိစီးမှု မြားပွီး ပငျပနျးကွရ လို့ပါ။ ယောကျြားက TV ကွညျ့ရငျး ဖုနျးသုံးနတေဲ့ အခြိနျမှာ မိနျးမက အိမျအလုပျတှေ မနားတမျး လုပျနေ ရမယျ ဆိုရငျ ဖွဈသငျ့ပါ့ မလား ?
ယောကျြားတှေ ကိုယျ့ရဲ့ ပနျးကနျ ကိုယျဆေးတာ မှားတယျ လို့ ဘယျသူ ပွောလဲ ? ယောကျြားတှေ ကိုယျ့အဝတျကိုယျ လြှျောတာ မှားတယျ လို့ ဘယျသူ ပွောလဲ ? ယောကျြားတှေ အိပျယာခငျးလဲတာ၊ စောငျခေါကျတာ တှကေ မှားတယျ လို့ကော ဘယျသူ ပွောလဲ ?
ကိုယျခဈြလို့ လကျထပျ ယူထားတဲ့ အမြိုးသမီး၊ ကိုယျနဲ့အတူ နနေတေဲ့ ခဈြသူကို ကူညီပေးဖို့ အတှကျ ဘာတှမြေား အမြားကွီး စဉျးစားဦး မှာလဲ?
ကလေး တဈယောကျလို အပွုစု အယုယ ခံခငျြရငျ အိမျထောငျပွုဖို့အစား သူမြား မှေးစားတာ ခံလိုကျဖို့သာ သငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျခဈြလို့၊ တနျဖိုး ထားလို့၊ အတူနခေငျြလို့ ဒီအမြိုးသမီးနဲ့ အိမျထောငျ ပွုခငျြတယျ ဆိုရငျတော့ သူ့ကို ခဈြပါ၊ သူ့ကို ကူညီပေးပါ။
အမြိုးသမီးတှဟော အခဈြခံရဖို့၊ အကွငျနာ ခံရဖို့၊ တနျဖိုးထား စောငျ့ရှောကျခံရဖို့ ဖွဈပါတယျ။ လိုအပျတဲ့ နရောမှာပဲ သုံးဖို့ မဟုတျပါဘူး။ အမြိုးသားတှလေဲ အတူတူ ပါပဲ။ နှဈဦး နှဈဖကျ ညီညီမြှမြှ ခဈြခငျ၊ လေးစား၊ တနျဖိုးထား၊ ကူညီ ပေးသငျ့ ပါတယျ ။
အိမ်ထောင်ဘက် လိုတာလား ၊ အိမ်ဖော် လိုတာလား
ယောက်ျား တစ်ယောက်က သူ့အဝတ်သူ လျှော်ဖွတ်နေတာ တွေ့ရင် လူတွေက ” မင်း မိန်းမ ယူလိုက် ပါလား၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မလျှော်ရတော့ ဘူးပေါ့ ” လို့ပြောမယ်။ ယောက်ျား တစ်ယောက် ထမင်းဟင်း ချက်နေတာ မြင်ရင် လူတွေက ” မင်း မိန်းမ ယူလိုက် ပါလား၊ ကိုယ်တိုင် မချက်ရတော့ ဘူးပေါ့ ” လို့ ပြောမယ်။
အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ်ရှိတဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက် သူ့ အတွင်းခံ သူ မလျှော်တတ်၊ သူ့ကော်ဖီသူ ဖျော်ဖို့ ရေနွေးတောင် မတည်တတ်၊ သူ့အိပ်ယာ သူတောင် မပြင်တတ်၊ သူစားပြီးသား ပန်းကန်တောင် သူ့ဘာသာ မဆေးတတ်တဲ့ အခါ သူ့အမေက ” မင်း အခြေကျဖို့ လိုနေပြီ၊ မင်းကို ဂရုစိုက် ပြုစုဖို့ မိန်းမတစ်ယောက် ယူတော့ ” လို့ ပြောမယ်။
ဒါဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ?
ဒီအဖြစ်တွေကို တခြား တဖက်က နားလည်ရရင် လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲကနေ မသိမသာနဲ့ ” မိန်းမ ယူတာ ဒီအလုပ်တွေ လုပ်ဖို့ ဖြစ်တယ် ” လို့ ပြောသလို ဖြစ်နေတယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ်၊ လျှော်ဖွတ်၊ ကလေးမွေးဖို့ အတွက်သာ မိန်းမ ယူကြပါလို့ ပြောနေသလို ဖြစ်နေတယ်။
များသောအားဖြင့် မိန်းမတွေဟာ သူတို့ ချစ်တဲ့ ယောက်ျား၊ သူတို့ ချစ်တဲ့ သားသမီး အတွက် ဒါတွေကို လုပ်ပေးချင် ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လူတွေက အဲဒီလိုတွေပဲ မြင်နေ ပြောနေတဲ့အခါ အဲဒီလို ယောက်ျားတွေဟာ အိမ်ထောင်ဖက်ကို လိုတာလား ? အိမ်ထောင်ဖက် အမည်ခံ အိမ်ဖော်ကို လိုတာလား လို့ ဝေခွဲမရ ဖြစ်လာကြတယ်။
မိန်းမတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် ၃ ဆ ပိုပြီး ရုပ်ရင့် နေကြတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှု များပြီး ပင်ပန်းကြရ လို့ပါ။ ယောက်ျားက TV ကြည့်ရင်း ဖုန်းသုံးနေတဲ့ အချိန်မှာ မိန်းမက အိမ်အလုပ်တွေ မနားတမ်း လုပ်နေ ရမယ် ဆိုရင် ဖြစ်သင့်ပါ့ မလား ?
ယောက်ျားတွေ ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းကန် ကိုယ်ဆေးတာ မှားတယ် လို့ ဘယ်သူ ပြောလဲ ? ယောက်ျားတွေ ကိုယ့်အဝတ်ကိုယ် လျှော်တာ မှားတယ် လို့ ဘယ်သူ ပြောလဲ ? ယောက်ျားတွေ အိပ်ယာခင်းလဲတာ၊ စောင်ခေါက်တာ တွေက မှားတယ် လို့ကော ဘယ်သူ ပြောလဲ ?
ကိုယ်ချစ်လို့ လက်ထပ် ယူထားတဲ့ အမျိုးသမီး၊ ကိုယ်နဲ့အတူ နေနေတဲ့ ချစ်သူကို ကူညီပေးဖို့ အတွက် ဘာတွေများ အများကြီး စဉ်းစားဦး မှာလဲ?
ကလေး တစ်ယောက်လို အပြုစု အယုယ ခံချင်ရင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့အစား သူများ မွေးစားတာ ခံလိုက်ဖို့သာ သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချစ်လို့၊ တန်ဖိုး ထားလို့၊ အတူနေချင်လို့ ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ အိမ်ထောင် ပြုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သူ့ကို ချစ်ပါ၊ သူ့ကို ကူညီပေးပါ။
အမျိုးသမီးတွေဟာ အချစ်ခံရဖို့၊ အကြင်နာ ခံရဖို့၊ တန်ဖိုးထား စောင့်ရှောက်ခံရဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာပဲ သုံးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားတွေလဲ အတူတူ ပါပဲ။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ညီညီမျှမျှ ချစ်ခင်၊ လေးစား၊ တန်ဖိုးထား၊ ကူညီ ပေးသင့် ပါတယ် ။